China Terpene pinene resin guruu fekitori zvinhu uye vatengesi | DESAY
Liquid terpene resin, inozivikanwawo se polyterpene kana piniini muti, inonyanya kutevedzana yemapolaramu ane mitsara kubva kune yakasviba kusvika kune yakasimba yakagadzirirwa necationic polymerization ye-pinene uye b-pinene kubva ku turpentine pasi paLewis catalysis. Mukuwedzera, cationic copolymerization ye-pinene uye b-pinene nemamwe ma monomers (senge styrene, phenol, phenol uye formaldehyde) yaishandiswa kugadzira terpenes - terpene-based resins senge styrene, terpenol uye terpene phenolic.
Liquid terpene resin inopenya yero uye yakajeka.Nemwaranzi kuramba, kukwegura kuramba, kuramba kudzikamisa asidhi, sanganisa alkali, anti-crystallization, yakasimba magetsi kuputira uye zvimwe zvivakwa.Ino nyungudika mu benzene, toluene, turpentine, peturu uye mamwe ma organic solvents. , asi isingasviki mumvura, formic acid uye ethanol.
★ Chigadzirwa mashandiro maitiro
1. Yakanaka yekutanga viscosity;
2, yakanaka kutonhora kuramba;
3, yakaderera mamorekuru uremu, nyore emulsify;
4. Kuenderana kwakanaka neSIS, SBS, EVA uye yakasikwa rabha.
Panyama uye Chemical Zvivakwa
1. Chiedza cheyero yakajeka yakajeka viscous mvura;
2, pane zvishoma terpene kunhuhwirira kwakanaka;
3, radiation radiation, anti-crystallization, yakagadzikana kune oxygen, kupisa, mwenje, yakasimba kuramba maacidi, alkalis, magetsi ekudzivirira;
4, inonyungudika nyore nyore mu benzene, toluene, turpentine, peturu, nezvimwewo, isingasviki mumvura, methanol uye ethanol.
★ Main kushandiswa
1, SIS, SBS inopisa inyauka;
2. Mvura-yakavakirwa inodzivirira bepa tepi;
3. Masking pepa tepi.
Liquid terpene resin inoyevedza tackifier. Yayo tackifier mashandiro ari kumusoro kune rosin rosin yakagadziridzwa zvigadzirwa uye petroleum resins.
Iyo zvakare inogadziridza yezvinhu zvinopisa zvinonyungudika. Iine huwandu hwakasiyana hwekushandisa. Inoshandiswa zvakanyanya muirabha, zvinonamatira, uye zvinonamira-zvinonamira zvinonamatira. Matepi anonamira, anopisa anonyungudika, pendi,
inki dzepamberi, kurongedza, anti-ngura mafuta uye mamwe maindasitiri anoshandiswa zvakanyanya.
Chigadzirwa Performance Unhu
3, yakaderera mamorekuru uremu, nyore emulsification;
4. Iyo inonyungudika muSIS, SBS, EVA uye yakasikwa rabha.
Panyama uye makemikari maitiro ezvigadzirwa
1, yakajeka yeyero yakajeka viscous mvura;
2, pane zvishoma terpene kunhuwirira;
3, radiation radiation, anti-crystallization, yakagadzikana kune oxygen, kupisa, mwenje, yakasimba kuputira asidi, alkali, magetsi;
4, yakanyunguduka mu benzene, toluene, turpentine, peturu, isingasviki mumvura, methanol uye ethanol.
1, SIS, SBS yekupisa sol;
2, mvura-yakavakirwa inodzivirira bepa tepi;
3. Meiwen anodzivirira mapepa tepi, nezvimwe.
Liquid terpene nebwe rudzi rwakanakisa tackifier, tackifier mashandiro ari nani pane eiyo rosin rosin yakagadziridzwa zvinhu uye petroleum resin, nezvimwewo, zvakare ndeye inopisa-melt zvinhu kugadzirisa kuchinjika kunoshanda uye iyo irabha, inonamira, kumanikidza inonamira namira matepi. , yepamusoro inopisa-yakanyunguduka kupfeka, pendi, inki, kurongedza, ngura-chiratidzo chemafuta, kutsenga chingamu uye mamwe maindasitiri anoshandiswa zvakanyanya.
Pashure: Maviri-chikamu bhodhi guruu
Zvadaro: Yakazara Glue / Super SBS Zvese-chinangwa General Adhesive Glue
Pepa repurasitiki guruu kudhinda rakaminama mota ...
Super gobvu polyvinyl doro bepa guruu transp ...